QAJAARKA KHAFIIF AH CUSBAYNAYA EE BAAKADDA: QORAAL KARIYE FUDUD OO DEGDEG AH (SIDA LOO MILIXO QAJAARKA 2-3 SAACADOOD) - SOOSAARKA DALAGGA
Karinta khudradda cusbada leh waxay u oggolaaneysaa in aysan si fudud u kordhin nolosha shafka ah ee badeecadan la jajabiyey, laakiin sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad siiso dhadhan aan caadi aheyn, si aad u keento qoraallo cusub dhadhanka qajaarka. Waxaan kuu dooranay qaar ka mid ah cuntada sida fudud loo diyaariyo saxankaan, faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waxaad akhrin karto hoosta.
Qajaar khafiif ah cusbayn: dhadhanka iyo dheefta
Dhadhaminta qajaarka la cusbaynayaa waxay ka duwan tahay dhadhanka miraha caadiga ah, kuwaas oo leh biyo macno leh oo inta badan ku jirta xayawaan.
Jeermiska, kuwaas oo si firfircoon loo isticmaalo geeddi-socodka salting, faa'iidada leh waxay xoojinaysaa dhadhanka caadiga ah iyo dhadhanka qajaarka, ka dhigaya wax aan caadi ahayn oo lagu daro qaar ka mid ah dhismooyinka cusub ee organoleptic.
Ma taqaanaa? Magaca Ruushka ee khudraddaas waxaa laga soo amaahday Giriigga qadiimiga ah, kaas oo u yeeray "aguros", taas oo macnaheedu noqon karo "macquul, lumis". Sida muuqata, Giriigta ayaa sidaas ugu yeertay midabkoodii hore.
Isla mar ahaantaana, qajaarka ma luminayaan qaabkoodii asalka ahaa, waxay ku suganyihiin, qoyaan iyo muuqaal cusub.
Salt, taas oo u adeegta sida xawaashka ugu muhiimsan ee geedi-socodka samaynta noocyo kala duwan, ma aha oo kaliya kor u qaata dhadhanka dabiiciga ah ee miraha, laakiin sidoo kale u oggolaanayaa qajaarka si ay u ilaaliyaan qoyaan iyo muuqaalkooda asalka ah ee dheer.
Marka lagu daro dhadhanka wanaagsan, miraha waxay haysanayaan hantidooda faa'iido leh, oo aan waqti u helin inay si buuxda uga baxaan sababo la xidhiidha kiimikada iyo ka shaqaynta kiimikada iyo kiimikada qoto dheer, sida hadana khudradda la keydsaday.
Waxaad sidoo kale xiiseyneysaa inaad ogaatid sida qajaarka cagaaran loo isticmaali karo faa'iido iyo waxyeelo, iyo sidoo kale sida loo kariyo salad qajaarka xilliga jiilaalka, sida loo dhigo qajaarka, sida loola tacaali karo iyada oo aan furaha farsameynin oo aan nadiifin, sida loo kariyo qajaarka saliida iyo digsi.
qajaarka khafiifka ah ee cusbada leh waxay qaadaan qiyaaso badan oo fiitamiin iyo macdan oo leh saameyno badan oo ku saabsan jirka;
waxay yihiin 90% biyaha, sidaa darteed waxaa loo isticmaali karaa mid ka mid ah ilaha biyaha dheelitirka biyaha;
Acetic acid, sii daayay nidaamka salting, waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan geedi socodka dheef-shiid kiimikaadana waxay ka caawisaa kordhinta rabitaanka cuntada;
saxan noocaas ah ayaa loo isticmaali karaa sida calool jilicsan;
Fennel, caleemo culus, qaraha, currant madow, lingonberry ayaa sidoo kale leh saameyn jilicsan.
qajaarka la cusbaynayaa wuxuu dhalin karaa saameynta xun ee aalkolada jirka.
Xaaladaha doorashada ee qajaarka ee qandhada
Habka ugu fiican ee kabiinkaan waa in uu ku habboon yahay khudaarta dhexdhexaadka ah, maadaama ay qajaarka waaweyni si firfircoon u qaadanayso milixda, iyo yar yar, si ka duwan, si deg-deg ah oo aad u badan leh.
Waxaa lagu talinayaa in la doorto miraha aan ku jiri doonin qodxan maqaarkooda, tan iyo iyada oo loo marayo cusbo dheeraad ah ayaa la sii deyn doonaa qoyaan.
Ma taqaanaa? Maqaaradaha ay ku badan yihiin noocyada qajaarka qashin-qaadashada ah ayaa lagama maarmaan u ah iyaga inay ka saaraan qoyaan xad-dhaaf ah. Sidaa daraadeed subaxa hore waxaad arki kartaa dhibic yar oo biyo ah mid kasta.
Khudaarta oo yar yar ayaa la lumay oo lumay macaankoodii asalka ahaa uma fiicna diyaarinta saxankaan, tan iyo markii loo cuskaday cusbada, waxay si deg deg ah u xoqin doonaan waxayna ugu dambeyntii waayayaan muuqaalkooda muuqaalka leh.
Marka aad dooranaysid khudradda, si taxadar leh u baaro miro kasta oo ka mid ah dhinacyada dhaawacyada farsamooyinka: waa in aysan laheyn qadar, maqaarka iyo cillado kale.
Sidoo kale waa inaad ka fogaato inaad iibsato khudaarta oo si cad u xanuunsanaya (cilladaha madow ee dusha sare, dhibco madow ama midab leh, qalajinta mid ka mid ah dariiqyada, iwm.).
Waxaa lagula talinayaa qaadashada qajaarka diyaarinta badeecadan, kaas oo lahaan lahaa dabo yaryar - joogitaanku wuxuu gacan ka geysanayaa ilaalinta dheeraadka ah ee miraha, marka lagu daro, xaaladaha daboolka, mid ayaa xukumi kara heerka casriga ee midhaha.
Noocyada noocaan ah ee qajaarka sida "Finger", "Siberian Festoon", "Crispin", "Emerald Earrings" ayaa ku habboon goosashada.
Dhamaadka dhammaadka xulashada, waxoogaa yaree cadaadiska khudradda gacantaada - qajaar wanaagsan waa in aanad udhicin gacmahaaga, laakiin iska caabin xooggan oo aad u adeegsatay si siman dhinac walba.
Sidee dhakhsalkolit ugu jirtaa qajaarka: talaabo tallaabo tallaabo ah oo leh sawirro
Cuntada soo socota waxay ugu fiican tahay astaamaha, iyo sidoo kale xaqiiqda ah in hirgelintiisa aysan u baahnayn tiro badan oo alaabta jikada leh.
Intaa waxaa dheer, waxay kuu ogolaaneysaa inaad hesho alaabta la rabo 10-12 saacadood, iyadoo ku xiran baaxada qajaarka, iyo sidoo kale xaddiga dhirta lagu daro waxyaabaha ugu muhiimsan.
Dhammaan maacuunta jikada ee qajaarka qashinka sidan ayaa si fudud loogu heli karaa jikada oo dhan.
Qalab qafiif ah cusbaynaya baakadka: video
Bacda adag ee adag;
hoobiye iyo boogaha;
Qaybaha ugu muhiimsan ee saxankani waa khudradda iyo milixda, dhammaan walxaha kale ee la soo jeediyay ee iskudhafan waa isbaddal, iskumidkoodu muhiim maaha.
Iyadoo ay ku xiran tahay dhadhanka, guri kasta oo guriga ka mid ah ayaa ka saari kara mid kasta oo ka mid ah, ama ku dar wax ka duwan cuntooyinka la soo jeediyay.
Halkan waxaa ku qoran maaddooyinka aad u baahan tahay si aad u diyaariso saxan si aad u hesho buuggan:
1.2 kg qajaarka;
1 farabadan ee cawska cusub (doorbidayaa dill);
3-4 xabo oo toon ah;
1 qaado oo shinni ah oo timir ah;
0.5 qaado oo sonkor ah.
Fududeynta hirgelinta manjadkan waxaa badanaa sabab u ah isticmaalka baco cellophane taas oo qajaarka la dhigo isku dhafka iyo salpingaha.
Nidaamka karinta laftiisa waa sida soo socota:
Qajaarka waxay u baahan tahay in la dhaqo oo la gooyo talooyinkooda.
Next, waxaad u baahan tahay si aad u jar jartey dill, halka waa in la gooyaa labada afkoda iyo caleemaha.
Kadibna waa inaad dhirtaa toonta oo adigana aad jarjartaa ama jajabisaa dusha sare ee mindhicirka.
Ka dib marka ay lagama maarmaan noqoto in lagu xoqo hoobiye iyo weel, dhirta timirta iyo caleen.
Next, gelin qajaarka boorsada, ku dar cagaarka jarjaran, toonta iyo ku shub milix, sonkorta, lowska jarjartey iyo caleen caleen iyaga.
Kadibna wax waliba waa isku dhafan yahay, isla markaana meel dhex mari jiray heerkulka qolka ilaa nus saac.
Waqtigaan ka dib, bacda qajaarka waxaa loo wareejiyaa qaboojiyaha 10-12 saacadood oo kale, ka dib markii santuuqa loo tixgelin karo diyaar.
Waa muhiim! Geedi socodka salting waa la dedejin karaa haddii aad jarjartey qajaarka qaybo dhowr ah ama qaado qajaarka yar-yar oo loo diyaariyo saxan.
Cuntadani waxay kaa caawineysaa inaad kala soocdo dhadhanka oo aad natiijo kale ka hesho mid hore.
Waa kuwan liiska maaddooyinka aad u baahan tahay si aad u kariso:
1 kg oo qajaarka yar;
1 qaado oo ah 9% khal.
0.5 qaado oo sonkor ah;
3-4 dherer dhexdhexaad ah oo toon ah;
1 farabadan ee dillada;
caleemaha malayga, currants iyo jeeriga ee saamiga 1: 3: 3.
Nidaamka karinta waa sida soo socota:
Si fiican u dhaq oo qajaarka, jarjar talooyinkooda oo mid waliba u geli 2 ama 4 qaybood.
Si yaryar u jarjar dill.
Shiikh qallaji oo ku dar adoo kale.
Ku dar dhammaan walxaha ku jira bacda, xir oo walwal walwal leh.
Ku rid qajaarka boorsada qaboojiyaha 2-3 saacadood.
Cuntadani waxay kaa caawin doontaa inaad hesho saxanka saxda ah dhowr jeer dhakhso, dhadhankiisuna aad ayuu uga duwan yahay kan hore.
Waa muhiim! Maskaxda ku hay in ay sabab u tahay aagga weyn ee xiriirka u dhexeeya saxarka qajaarka iyo deegaanka, waxay si firfircoon ugu deeqaan casiirka. Sidaa darteed, waxay u baahan doonaan in la cuno wakhti aad u gaaban, haddii kale waxaad si fudud u tuuri kartaa badeecada la tirtiray.
Ma suurtogal in la badbaadiyo qajaarka xilliga jiilaalka
Dabcan, milixda waa qayb ka mid ah alaabooyinka cusbada leh waxay leeyihiin waxyaabo ilaaliya oo u oggolaanaya alaabooyinka inay ku haystaan ​​dhadhanka la aqbali karo iyo dhadhanka mudo dheer oo ka badan inta caadiga ah.
Si kastaba ha noqotee, waa in la xasuustaa in cusbadu ay tahay mid adag oo adag.
Intaa waxaa dheer, inta lagu jiro habka diyaarinta pickles sida ku qoran qodobadan, ma jirto habab dheeraad ah ee jeermi-dilista iyo nadiifinta ayaa loo isticmaalaa, taas oo, hal gacan ah, fududeeyaa nidaamka, laakiin dhanka kale, si weyn ayuu u yareeyaa waqtiga helitaanka saxanka.
Haddii aad rabto in aad ilaaliso qajaarkaaga mudo dheer, waxaad isticmaashaa isku dhaf ah cusbo iyo geed isbiirtada ah.
Xaqiiqda ah inta lagu jiro cunto karinta, gaar ahaan sida ku xusan qiyaasta labaad, waxaa jira xad-gudub xad-dhaaf ah oo ah qaab-dhismeed asalka ah, taas oo ka dhigaysa inay ka bixiyaan casiirka iyo qoyaanka si deg deg ah, iyo geeddi-socodkuna ugu dambeyntii keeno dardar-celintooda.
Gabagabadu waa: qajaarka khafiifka ah ee cusbada leh ayaa lagu kaydiyaa waqti ka badan sidii caadiga ahaydSi kastaba ha ahaatee, si ay ugu raaxaystaan ​​inta lagu jiro xilliga qaboobaha, waxaa fiican in la isticmaalo qaab kale.
Fikradda ujeeddadan waa soo saarista ilaalinta iyadoo la adeegsanayo tiknooloojiyada nadiifinta iyo soo rogista daboolyada birta.
Isku-darka Culinary iyo adeegga
Habka ugu wanaagsan, macaamiilkan ayaa fiirin doona miiska saaran saxarad gaar ah ama saxan yar, taas oo lagu sii qurxin karo cagaarka, karootiga Kuuriya, celery ama khudaar cad oo la jarjaray.
Qajaar aad u wanaagsan oo cusbada leh ayaa ku habboon cunnada fudud ee cabitaanka khamriga, sida saxan dhexdhexaad ah oo ka dhexeeya midka ugu muhiimsan ama marka lagu daro cunnida.
Waa hagaag tan waxaa lagu daray baradhada la shiiday, baradho la dubay, suxuunta hilibka, xayawaanka, noocyo kale oo kalluun ah, iyo sidoo kale cuntooyin kala duwan oo la kariyey dab ama fur.
Waa inaadan u adeegin qajaarka khafiifka ah ee cusbada leh cuntooyin kala duwan oo miro ah, tan iyo dhadhanka macaanku badanaa waafaqsan yahay dhadhanka cusbada qajaarka.
Sida aad u arki karto, iyadoo gacan ka heleysa xirmooyinka caadiga ah ee cellophane waa sahlan tahay in la kariyo qajaarka saliida leh.
Tijaabo kala duwan oo kala duwan oo dhir udgoon iyo xawaashyo, dooro kuwa ugu haboon ee adiga iyo qoyskaagaba qaybta milixda iyo khalka, isla markiiba waxaad awoodi doontaa inaad si madaxbannaan u hesho cuntooyinka ku habboon dhadhankaaga. Ku raaxeyso cuntada!
qaado qajaarka yaryar oo leh finan yaryar, gooyn qalajiyo, ku rid bac, sidaas darteed waxaa jira sunar, dillad bac ah Qiyaas ahaan 2 qaado oo milix ah ayaa lagu daraa 500 garaam oo qajaarka ah.
Doofaarka khatarta ah